IndigiTUBE: Fampahalalam-baovao Avy amin’ny Sy Ho An’ireo Vahoaka Vazimba Teratany Any Amin’ny Faritra Lavitr’Andriana Ao Aostralia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Marsa 2012 12:03 GMT
Ireo vazimba teratany any amin'ireo faritra lavitr'andriana any Aostralia dia mitoetra hatrany ho ny vondrona faran'izay navela ho anjorom-bala eo amin'ny firenena ary miatrika fahantràna sy fanavakavahana isan'andro. Amin'ny ankapobeny ny fomba fijery dia hoe ireo Aostraliana vazimba teratany, na ahoana na ahoana, dia mahazo fomba fitondra miavaka mihitsy. Saingy ny tantaran-dry zareo momba ny fakàna ny fananany sy ny fatiantoka zakainy no maneho ny tena zava-misy.
IndigiTUBE dia vondrom-piarahamonina ety anaty aterineto ho fifampizaràna sy fidirana amin'ny fampahalalam-baovao natao sy ho an'ireo vazimba teratany any amin'ireo faritra lavitr'andriana ao Aostralia. Ny namorona azy io dia i Alice Springs ao aminà fikambanana vondrom-piarahamonina mahazo famatsiam-bola, ny Indigenous Community Television (ICTV) & the national body – Indigenous Remote Communications Association (IRCA). IndigiTUBE dia sady ahitàna pejy fidirana aminà fampielezam-peo sy tolotra lahatsary averina ampitaina mivantana.
Ilay tranonkala dia manasongadina lahatsary aminà tenim-bazimba teratany 25 samihafa miaraka aminà lohahevitra miainga avy amin'ny fihazàna, fanjonoana ary ny fahandroan-kanina, ny famantarana ny voro-manidina, lahatsarinà mozika sy fankalazana nentin-drazana.
Claire ao amin'ny bilaogin'ireo Mpianatra Aostraliana Miteny Ny Tenim-bazimba Teratany dia manoratra hoe :
IndigiTUBE dia manana andiana lahatsarin-kira, tantara fahagola sy dihy ka hatramin'ny lesona fampianarana ny teny avy amin'ireo vondrom-piarahamonina lavitr'andriana ao Aostralia. Ireo vondron'ny teny dia ahitàna ny Ngaanjatjara, Pitjantjatjara, Gija sy Karrajarri. Misy ireo lahatsarin-kira avy amin'ny tranonkala Ngapartji Ngapartji izay lesona fianarana ny teny Pitjantjatjara. Mba topazo maso raha toa ianao te-hahafantatra teny bebe kokoa, hhira hira izay, na hijery sao mba misy olona fantatrao ao. Misy lahatsary maro avy amin'ny PY Media sy ny APY Lands. Miovaova ny faharetan'ireo lahatsary. 5 hatramin'ny 60 minitra. Misy lohamilina mpikaroka iray hanampiana anao hahita izay tadiavinao. Araka ny lazain'ilay tranonkala hoe “napetraka izy io mba hanampiana hifamnpizàrantsika ny mozikantsika, ny tantarantsika ary ny fiainantsika – eo amin'izy samy izy, sy miaraka amin'izao tontolo izao!”
Ity misy lahatsary fohy mitondra ny lohateny hoe “Arrwekeleny Lyeteny (Fomba Fahiny & Fomba Vaovao)“. Ireo vehivavry mpanakanto ao Warakurna dia mitantara ny tantaran'ny Blue Tongue Lizard Dreaming , na Ny Nofonofin'ny Teny Manga Lizard, ary dia mihaino ny ankizy, sady manaja ny tantaran'ny firenena, no mandihy mihitsy any amin'ny farany.
Araho ny IndigiTUBE ao amin'ny Twitter, Facebook sy YouTube.